IZIMBANGELA ZOKUYEKA - 802Quits
Ikhaya » Ama-Vermonters » Izizathu zokuyeka
Izizathu zokuyeka okuhle
Yisiphi isizathu esihle sokuyeka ukubhema, ukuqhuma noma ukusebenzisa eminye imikhiqizo kagwayi? Kunezizathu eziningi zokuyeka. Zonke zilungile. Futhi awuwedwa.
Umama okhulelwe noma omusha?
Thola usizo lwamahhala olwenzelwe ukuyeka ukubhema nolunye ugwayi wena nengane yakho.
Kunezizathu eziningi zokuyeka ukubhema noma ukusebenzisa eminye imikhiqizo kagwayi. Ngeke nje ukuyeka ugwayi, i-e-cigarettes noma olunye ugwayi kuzothuthukisa impilo yakho, kungakusiza uzizwe ungcono futhi kukunikeze amandla athe xaxa okuzibandakanya kweminye imikhuba enempilo njengokuzivocavoca umzimba.
Ngenkathi abantu abaningi bekhathazekile ngokuthola isisindo ngemuva kokuyeka, kubalulekile ukugcina engqondweni zonke izinzuzo zokuyeka ukubhema noma olunye ugwayi nokuthi wenzani impilo yakho ngokuyeka. Ngoba ukubhema kuthinta umzimba wonke, umzimba wakho wonke uyasizakala.
Uma ukhathazekile ngokuthola isisindo, noma ufuna ukufunda ngalokho ongakudla ukunqanda izifiso zakho, nazi izeluleko ezingakusiza ukuvimbela ukuzuza kwesisindo futhi uthuthukise impilo yakho!
YONDLA UMZIMBA WAKHO NGOKUDLA OKUNEMPILO
Khumbula ukuthi akukhona ukuzincisha okuthile — kumayelana nokondla umzimba wakho ngalokho okudingeka ube yikho ngokusemandleni akho. Ukudla okunempilo akunakusiza kuphela ukuvimbela ukuzuza kwesisindo, kungaba mnandi! 1 2
Yidla izithelo eziningi nemifino.
Hlela ukudla kwakho nesidlwana esinempilo ukuze ungalambi ngempela. (Kulula kakhulu ukuthatha ukudla okungenampilo uma ulambile.)
Qhamuka nohlu lokudla okulula okunempilo okuthandayo (isb. Imbewu ye-sunflower, izithelo, ama-popcorn angacutshiwe, ama-wholegrain crackers anoshizi, induku ye-celery nebhotela lamantongomane).
Phuza amanzi amaningi futhi ulinganisele iziphuzo ngama-calories afana notshwala, amajusi anoshukela nama-sodas.
Bukela osayizi bezabelo zakho. Ipuleti Lokudla Okunempilo2 ngezansi kungakusiza uhlele osayizi bezabelo zakho.
Hlela ukuthi uhhafu wepuleti lakho lesidlo sakusihlwa ube izithelo noma imifino, u-1/4 wepuleti abe yiprotheni elinciphile (isb., Inkukhu, inhlanzi ebhakwe, isilili) kanti u-1/4 wepuleti abe yi-carb enempilo njengamazambane amnandi noma irayisi elinsundu.
Uma une "izinyo elimnandi," beka i-dessert kube kanye ngosuku futhi ukhawule usayizi we-dessert (isb., Inkomishi uhhafu ka-ayisikhilimu, uhhafu wenkomishi yamantongomane exutshwe nezithelo ezomisiwe nama-chip amnyama, ama-oz ama-6. I-yogurt yamaGrikhi ene-1 ucezu lwesithelo esisha, izikwele ezi-2 zoshokoledi omnyama). Sesha i-inthanethi ukuthola "imibono enoshukela enempilo."
KHAWULEZA UMZIMBA WAKHO NGOKUHAMBA ZONKE IZINSUKU
Ukuzivocavoca umzimba, njengokuhamba, ukusebenza ingadi / ukusebenza kwegceke, ukuhamba ngebhayisikili, ukudansa, ukuphakamisa izinsimbi, ukufaka ifosholo, ukushushuluza unqamule izwe, ukushayelwa iqhwa, kukusiza ngezindlela eziningi1:
Isiza ukuthuthukisa imizwa yakho
Isiza ukukuvimbela ekutholeni isisindo
Igcina amazinga kashukela phansi ukuvimbela isifo sikashukela (noma ukugcina isifo sikashukela silawulwa)
Kwenza umzimba uqine
Kugcina amathambo namalunga akho enempilo
Beka umgomo wokungeza imizuzu eyengeziwe engu-5 yokuvivinya umzimba kulokho osuvele ukwenza usuku ngalunye uze ufinyelele ihora ngosuku. Khumbula, ukuvivinya umzimba kungaba yinoma yini ekwenza unyakaze ngokwanele ukujuluka.
KHETHA IMISEBENZI NGAPHANDLE KOKUDLA UKUSIZA UKULWA NEZIMANGALO
Ukujwayela ukukhuluma ngomlomo usebenzisa ugwayi — ikakhulukazi ukubhema — kungaba nzima ukuwuyeka njengogwayi uqobo. Kuyazama ukufaka usikilidi, i-e-cigarette noma ipeni lokufaka ukudla ukudla ukwanelisa lowo mkhuba owenziwa ngesandla. Abanye abantu abasebenzisa ugwayi bakuthola kuwusizo ukuhlafuna ngotshani noma ushingamu ongenashukela, noma benze okuthile okusha ukuze baphathe izandla zabo.
Ungavumeli ukukhathazeka kokuthola amakhilogremu ambalwa kukwenze ungakuyeki. Ngokuyeka kwakho awuthathi nje izinyathelo zokwengeza iminyaka empilweni yakho, wenza impilo yakho ibe ngcono futhi ugcina abantu abaseduze kwakho bephephile ekubhemeni ugwayi kagwayi. Unganqikazi ukukhuluma nomhlinzeki wakho wezokunakekelwa kwempilo uma ukhathazekile ngokuthola isisindo.
Nazi ezinye izinsiza zokwehlisa isisindo noma ukugcina isisindo esinempilo:
I-CDC: Isisindo Esinempilo
I-CDC: Ukudla okunempilo ngesisindo esinempilo
Intuthu kagwayi ayinampilo kuwo wonke umuntu ekhaya lakho. Kepha kuyingozi ikakhulukazi ezinganeni amaphaphu azo asakhula nakubantu abanesifuba somoya, umdlavuza, i-COPD nesifo senhliziyo. Eqinisweni, ukubhema nokuchayeka entanyeni kagwayi kungenye yezimbangela ezivame kakhulu nezibi kakhulu zesifuba somoya.
Udokotela ohlinzayo Jikelele wase-US uthi kukhona cha Izinga elingenabungozi lokuvezwa intuthu kagwayi. Noma ngubani, ukuba seduze kwentuthu kagwayi kufana nokuthi bayabhema, nabo. Ngisho nokuchayeka okuncane entuthu kagwayi kunemiphumela esheshayo eyingozi, njengokwanda kwengozi yesifo senhliziyo, isifo sohlangothi, isifo sikashukela nomdlavuza wamaphaphu.
BHEKA ZONKE IZINDLELA ISKHWIMU SOKUSELA SIBI KWAKHO KANYE NEZITHANDO ZAKHO
Izingane nezingane zinamaphaphu amancane asakhula. Banobungozi obukhulu ngisho nangaphezulu kusuka kubuthi obubusayo obusetshenziswayo.
Lapho izingane ziphefumula ngentuthu, kungadala izinkinga zempilo ezihlala nazo impilo yabo yonke. Lokhu kufaka phakathi izinkinga ezifana ne-asthma, i-bronchitis, i-pneumonia, ukutheleleka njalo kwezindlebe kanye nokungezwani komzimba.
Kubantu abadala abaphethwe yisifuba somoya, ukungezwani komzimba noma i-bronchitis, ukubhema intuthu kagwayi kwenza izimpawu zibe zimbi kakhulu.
Izingane ezinabazali noma abanakekeli ababhemayo zisengozini ephindwe kabili yokufa nge-Sudden Infant Death Syndrome (SIDS).
Izilwane ezifuywayo eziphefumula intuthu kagwayi zinenkinga yokungezwani komzimba nayo, umdlavuza namaphaphu kunezilwane ezihlala emakhaya angenantuthu.
Imiphumela Yezempilo Yokuzibonela Ngokuzithandela Kubhema Ugwayi: Umbiko Wodokotela Ohlinzayo Jikelele
Umndeni wakho ungaba yisisusa esikhulu sokukusiza uyeke ukubhema osikilidi, ama-e-cigarettes noma eminye imikhiqizo kagwayi. Bavumele bakukhuthaze futhi bakusekele emizamweni yakho yokuyeka.
Angifuni ukuthi amadodakazi ami amathathu, umyeni wami noma abazukulu bami aba-3 badlule ekungibukeleni ngibulawa isifo esesabekayo, ngendlela esabekayo! Izinsuku ezingamashumi amathathu ngaphandle kukagwayi nezinsuku eziningi zokuphila ngaphambi! Angikwazi ukujabula kakhulu. 🙂
Ukutholakala ukuthi unesifo kungaba wuvalo olwesabekayo olukugqugquzela ukuthi uthathe izinyathelo zokuqala zohlelo lokuyeka ukubhema noma olunye ugwayi. Ukuthi ukuyeka phansi kungakusiza ukugula kwakho noma kukusize uphathe kangcono izimpawu zakho, izinzuzo zezempilo zingafinyelela kude.
Lapho ngishiya eminyakeni eyi-17 eyedlule, kwakungekhona okokuqala ukuthi ngizame ukuyeka, kepha kwaba isikhathi sokugcina nesokugcina. Ngisanda kutholakala ngine-bronchitis engapheli kanye ne-emphysema esiteji sokuqala, ngangazi ukuthi leso kwakuyisixwayiso sami sokugcina. Ngabona ukuthi nganginenhlanhla kangakanani yokuthi angitshelwanga ukuthi nginomdlavuza wamaphaphu.
Vikela Impilo Yengane
Uma wena noma umlingani wakho ukhulelwe noma ucabanga ukukhulelwa, manje isikhathi esihle sokuyeka ukubhema. Ukuyeka ukubhema ngaphambi, ngesikhathi noma ngemuva kokukhulelwa kungcono kakhulu isipho ongasinika wena nengane yakho.
Kunciphisa ithuba lakho lokuphuphunyelwa yisisu
Inika ingane yakho umoya-mpilo omningi, ngisho nangemva kosuku olulodwa nje ingabhemi
Idala ingozi encane yokuthi ingane yakho izalwe kusenesikhathi
Kuthuthukisa ithuba lokuthi ingane yakho izobuya ekhaya ivela esibhedlela
Kunciphisa izinkinga zokuphefumula, ukuvunguza nokugula ezinganeni
Yehlisa ubungozi beSifo Sokufa Kwezinsana Ngokuzumayo (i-SIDS), izifo zendlebe, i-asthma, i-bronchitis ne-pneumonia
Impilo yakho ibalulekile nasenganeni yakho, nayo.
Uzoba namandla amaningi futhi uphefumule kalula
Ubisi lwakho lwebele luzoba nempilo enhle
Izingubo zakho, izinwele kanye nekhaya lakho kuzohogela kangcono
Ukudla kwakho kuzozwakala kangcono
Uzoba nemali eningi ongayisebenzisa kwezinye izinto
Ngeke ube namathuba amancane okuba nesifo senhliziyo, isifo sohlangothi, umdlavuza wamaphaphu, izifo ezingapheli zamaphaphu nezinye izifo ezihlobene nentuthu
Thola usizo olwenziwe MAHHALA olwenziwe ukuyeka ukubhema noma olunye ugwayi bese uhola imivuzo yekhadi lesipho! Shayela 1-800-YEKA-MANJE ukusebenza nomqeqeshi oqeqeshwe ngokukhethekile wokukhulelwa futhi ungathola i- $ 20 noma i- $ 30 ikhadi lesipho ngocingo ngalunye olugcwalisiwe (kuze kufike ku- $ 250) ngesikhathi nangemva kokukhulelwa kwakho. Funda kabanzi bese uqala ukuthola imivuzo.
Ukulahlekelwa othandekayo kuyisisusa esibalulekile sokuyeka ukubhema. Abanye abaseVermont baye bayeka ukuhlonipha impilo yomuntu abamthandayo.
Ubaba wami wabulawa yizo zonke izindaba zezempilo ezihlobene nokubhema. Umama wami usaphila, kodwa uke wahlinzwa inhliziyo ngokukhululeka ngenxa yokubhema kwakhe. Ngeshwa, nginezinkinga ezithile zezempilo ezihlobene nokubhema: i-osteoporosis, ama-polyps kuma-vocal chords ami ne-COPD. Lolu wusuku lwami lokuqala impela, futhi ngizizwa ngimuhle futhi ngiqinile impela. Ngiyazi ukuthi ngingakwenza lokhu. Ngiyazi ukuthi ngifanele ukukwenza.
Lapho uyeka ukubhema, ukuqhuma noma eminye imikhiqizo kagwayi, akuyona impilo yakho kuphela oyilondolozayo. Uyomangala ukubona ukuthi yini ongakwazi ukuyenza uma ungasebenzisi imali kusikilidi noma e-cigarettes, ekuhlafuneni ugwayi, isinemfu noma ukuhambisa izinto.
Ngangivame ukubhema iphakethe ngosuku, okwakubiza kakhulu. Ngakho-ke lapho ngishiya phansi, ngaqala ukufaka ama- $ 5 ngosuku embizeni ekhishini lami. Ngiyekiwe izinyanga eziyi-8 manje, ngakho-ke ngithole isinqamu esihle soshintsho esilondoloziwe. Uma ngifika onyakeni wokuyeka, ngihambisa indodakazi yami eholidini nemali.
Ulungele ukuthatha isinyathelo sokuqala?
Dala uhlelo lokuyeka olwenziwe ngezifiso ngama-802Quits namuhla!